SWEET LIFE CAMP REAL ESTATE SERVICES CO.ltd (REGISTRATION NO 120341464) | iMyanmarHouse.com
မင်္ဂလာပါ- -ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ၀ယ်ယူတဲ့အခါမှာ တန်ဖိုးနည်းတာတွေကို ၀ယ်ယူရတာက သိပ်လည်းစဉ်းစားစရာမလိုသလို risk လည်းနည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်လိုမျိုး တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာတွေ ၀ယ်ယူဖို့ ဆိုရင် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရခက်လှပါတယ်။
အိမ်ဝယ်ဖို့ ရွေးချယ်တဲ့ အခါ ဒီအချက်လေးတွေကို ထည့်စဉ်းစားရပြီး ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုမိုလွယ်ကူစေမှာပါ။
၁) မိမိနေချင်တဲ့ တည်နေရာအနေအထားပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမကောင်း
၂) ပိုင်ဆိုင်မူ့ ခိုင်မာသလား
၃) မိမိဝယ်မယ့် အိမ် / တိုက်ခန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စအကြောင်းအရာများအားလုံး
သင့်စိတ်ကူးထဲက အိမ်နဲ့ အကိုက်ညီဆုံး သင့်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေမယ့်မြေကွက်/ အိမ် /တိုက်ခန်း / condo များကို ကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင် နဲ့ တိုင်ပင်ဝယ်ယူပြီးအကြံညဏ်ကောင်းများနှင့် စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ဖို့အကြံပြုပါရစေ- HOME lONE (အိမ်ရာချေးငြွေဖင့်ဝယ်ယူရန်အတွက် -KBZ bank -AYA bank-CB bank တို့နှင့်လွယ်ကူစွာချိတ်ဆတ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်-
အသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက် ( 09895366311-09767987611 သို့ ဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေ(viber 09266667609)
သို့ ပေးပို့ ၍ ဖြစ်စေ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်http://www.sweetlifecamp.com/။FACEBOOK PAGE- (SWEET LIFE REAL ESTATE SERVICES)
#SWEET LIFE CAMP CO.LTD -
ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/Sweet-Life-Real-Estate
Ad Number R-18583239
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေဝဇယႏၱာလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းအနီး (40'60') 2RC အငြါးတစႅ ၁၄ သိန္း ညိွႏိႈင္း3Master...
South Okkalapa|Yangon Region
14 Lakh (Kyats)
17 Lakh (Kyats)
တောင်ဥက္ကလာ ၆ ရပ်ကွက် ၊ဟံသာဝတီဗီလာတွင် ၄ လွှာ ကွန်ဒိုအခန်းငှါးမည်။ ( Lift ) တစ်လ ၈ သိန်း အကျယ်...
8 Lakh (Kyats)
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် သစ္စာလမ်းမကြီးအနီး နှစ်ထပ်လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှါးမည်။ (၂၀*၆၀)...
3 Lakh (Kyats)
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် သစွာလမ်းမကီးနှင့်ဝေဇယန္တာလမ်းမကြီးအနီး တိုက်ခန်းကျယ်...
3.70 Lakh (Kyats)
သင်္ဃကျွန်းကျွန်းမြို့နယ် (၁၆) ရပ်ကွက် နှစ်ထပ်လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှါးမည်။ (၂၀*၆၀)...
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ပါရမီရိပ္သာ ျမစပါယ္လမ္း အနီး ျမဝတ္ရည္လမ္းအတြင္း (50'100') ျခံ အိမ္အက်ယ္ (30'40')...
ေတာင္ဥက္ကလာပၿမိဳ့နယ္ ၁၈ေပ ၅၄ေပ အခန္း ၃ခန္းဖြဲ႕ၿပီး ဘိုထိုင္အိမ္သာ တတိယအထပ္ ေလးလႊာ ၁၂...
ေတာင္ဥက္ကလာပၿမိဳ့နယ္ ၁၈ေပ ၅၄ေပ အခန္း ၃ခန္းဖြဲ႕ၿပီး ဘိုထိုင္အိမ္သာ တတိယအထ...
370 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8264328
MaLiKha Condo for Sale Location - Yadanar road, Thingangyun Township.6floor(corner room) 1000 sq-ft 1 Master Bedroom 1 Bedroom Living room, Kitchen, Commom Bath & W/C 1650 lakhs (negotiable) Condo facilities: Swimming pool Gym ...
MaLiKha Condo for Sale Location - Yadanar road, Thingangyun Township. 6...
Ad Number S-8264285
Ad Number S-8264258
Ad Number S-8264215
Ad Number S-8264196
သုမဂ္လာလမ္းမႀကီးအနီး ေစ်းတန္တိုက္သစ္ေရာင္းမည္ ရာဇဓိရာဇ္လမ္းသြယ္ အခန္းအက်ယ္၀န္း 18 x 54...
395 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8264062
590 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8262924
အက်ယ္အဝန္း ၂၅ ေပ ၆၀ေပ(1500sqft) Masterbedroom 1 ခန္း၊ Double room 1...
Ad Number S-8262768
Aung Chan Thar Condominium 1600sqft Three master bedrooms 1st floor Fully furnished Carparking 24hrs security Price-1900lakhs(nego) C2
Aung Chan Thar Condominium 1600sqft Three master bedrooms 1st floor Fully...
Ad Number S-8256822
CONDO. FOR SALE
SCHG စမ်းချောင်းမြို့နယ် Sanchaung Garden Residence (Luxury)ကွန်ဒိုတွင် အခ...
Ad Number S-8256799
အမှတ် (14)သမာဒိ(4)လမ်း- မြေညီ-သင်္ဃကျွန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့။
I would like to know more in details about your company and services. Please contact me as soon as possible. Thank you!